कोभिड संक्रमणबाट थप एकजनाको मृत्यु - The Sikkim Chronicle
Sherab Palden Bhutia May 10, 20210103
SC Bureau Jan 16, 202101047
Sherab Palden Bhutia Mar 16, 20210398
गान्तोक,18 जुलाई: सिक्किममा 20वटा नयाँ कोभिड मामला देखा परेको छ। यी सबै संक्रमण राज्यको पूर्व जिल्लाका विभिन्न स्थानहरुमा पाइएको जानकारी आजको हेल्थ बुलेटिनमार्फत स्वास्थ्य सचिव डा. पेम्पा. टी. भुटियाले सार्वजनिक गरेका हुन्। रम्फूको स्क्रिनिङ सेन्टरमा राज्यमा भित्रिनेहरुमध्ये एक युवक संक्रमित पाइएका छन्। तिनलाई हिमालयन फार्मेसी कोभिड केयर सेन्टरमा राखिएको छ। मनिपाल सेन्ट्रल रेफरल अस्पतालमा गरिएको […] The post कोभिड संक्रमणबाट थप एकजनाको मृत्यु appeared first on The Sikkim Chronicle - Sikkim News.
Aug 18, 2020 - 13:18
गान्तोक,18 जुलाई: सिक्किममा 20वटा नयाँ कोभिड मामला देखा परेको छ। यी सबै संक्रमण राज्यको पूर्व जिल्लाका विभिन्न स्थानहरुमा पाइएको जानकारी आजको हेल्थ बुलेटिनमार्फत स्वास्थ्य सचिव डा. पेम्पा. टी. भुटियाले सार्वजनिक गरेका हुन्।
रम्फूको स्क्रिनिङ सेन्टरमा राज्यमा भित्रिनेहरुमध्ये एक युवक संक्रमित पाइएका छन्। तिनलाई हिमालयन फार्मेसी कोभिड केयर सेन्टरमा राखिएको छ। मनिपाल सेन्ट्रल रेफरल अस्पतालमा गरिएको एन्टिजेन टेस्टमा3जनाको रिपोर्ट पोजिटिभ आएको बताइएको छ जसमध्येअनि एकजना सेतीपूलका मेकलोइडस् कम्पनीका अनि 2जना पाँच माइलका रहेका छन्।
सोही आधारमा सिक्किम मिल्क युनियन क्षेत्रलाई 72 घण्टाको निम्ति कन्टेन गरिएको छ। मेक्लोइडस् कम्पनी रानीपूलका जम्मा 5जनामा नयाँ संक्रमण पाइएको छ भने आइटीबीपी लिङदुमबाट 3जना संक्रमित पाइएका छन्।
पूर्व सिक्किम लोवर साम्दुङकी एक 28 वर्षीय महिलामा संक्रमण पाइएको छ। माइक्रोल्याब मामरिङका6जना पोजिटिभ पाइएका छन्। उनीहरु सबै हाल गान्तोकमा पेड कवारेन्टाइनमा रहेका छन्।
एकजना बिरामीको सिङताम अस्पताल ल्याउने क्रममा मृत्यु भएको छ। तिनी एल्केम कम्पनी समरदुङका कर्मचारी थिए अनि रम्फू आइबीएम कोलोनीमा रहँदै आएका थिए। तिनलाई श्वास सम्बन्धी केही समस्या देखा परेको थियो। तिनको पहिचान बिहार निवासी 45 वर्षीय पुरूषको रुपमा गरिएको छ। र्यापिड एन्टिजेन टेस्मा तिनको रिपोर्ट नेगेटिभ आएपनि आरटीपीसीआरमा भने तिनको रिपोर्ट पोजिटिभ आएको बताइएको छ। गत 18 जुलाईदेखि तिनी काममा उपस्थित हुन सकिरहेका थिएनन्।
सो व्यक्तिलाई सिङताम अस्पतालको इमर्जेन्सी वार्डमा ल्याइएकोले सो वार्डलाई 72 घण्टाको निम्ति कन्टेन गरिएको बताइएको छ। तिनीसँग सम्पर्कमा आएका चिकित्सक एवं नर्सहरुलाई क्वारेन्टाइनमा पठाइएको छ। अस्पतालको ओपीडी-1लाई अस्थायी रुपमा इमर्जेन्सी वार्डको रुपमा परिणत गरिएको छ।
मार्तम-रुमतेकका विधायक सोनाम भेन्चुङ्पाको कोभिड जाँच रिपोर्ट नेगेटिभ आएको छ। तिनी हालै आइटी विभागमा राज्यबाहिरबाट आएका इन्जिनियरहरुको सम्पर्कमा आएको बताइएको थियो। तिनले 15 अगस्तको दिन लाचुङको एउटा समारोहमा भाग लिएकाले सो कार्यक्रममा उपस्थित अन्य व्यक्तिहरु तिनी प्राइमेरी कन्ट्याक्ट रहेको थाहा पाएपछि चिन्तित बनेका थिए। स्वास्थ्य सचिव डा. भुटियाले सो समारोहमा भाग लिने सम्पूर्णलाई विधायकको रिपोर्ट नेगेटिभ आएकोले अब चिन्ता नलिने भनेका छन्।
समाचार लेखुन्जेलसम्मको तथ्याङ्क अनुसार राज्यमा कोभिड-19 को सक्रिय मामला 450 रहेको छ भने 755 जना निको भइसकेका छन्। कोरोनाको कारण आज एकजनाको ज्यान गएको पुष्टि भएपछि अब सिक्किममा संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या2पुगेको छ। यसैगरी कुल संक्रमणको संख्या 1207 पुगेको छ।
The post कोभिड संक्रमणबाट थप एकजनाको मृत्यु appeared first on The Sikkim Chronicle - Sikkim News.
Bimal Thapa Sep 9, 20200554
Bimal Thapa Dec 7, 20200929
Bimal Thapa Jul 1, 20200713
Bimal Thapa Oct 6, 20200605
Bimal Thapa Aug 19, 20200792
SC Bureau Dec 29, 20200769
admin Sep 1, 20200372
SC Desk Oct 5, 202001671
admin Feb 20, 20210190
Bimal Thapa Oct 10, 202001079
Bimal Thapa Nov 3, 202001003
SC Desk Nov 23, 20200297
SC Desk Jan 31, 20200536